Mirongatra ny kitrotro eto Antananarivo : Tafakatra 2 885 ireo voany -
AccueilSosialyMirongatra ny kitrotro eto Antananarivo : Tafakatra 2 885 ireo voany
Mirongatra ny kitrotro eto Antananarivo : Tafakatra 2 885 ireo voany
14/11/2018 admintriatra Sosialy 0
Tsy mitsahatra mitombo isa hatrany ireo olona voan’ny aretina kitrotro. Efa tafakatra 2 885 hatreto ireo voany raha ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ka 2000 mahery amin’io eto amin’ny faritra Analamanga. Izany hoe, ny distrikan’Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Ny tsy fanaovana vaksiny no voalaza fa antony mampirongatra azy ity. Marihina fa tsimok’aretina ny kitrotro, ary ny fifampikasohana amin’ireo voany no tena mahatonga azy miparitaka. Tsy ireo ankizy ihany anefa no voany fa hatramin’ireo olon-dehibe tratrany avokoa. Manoloana ny fiparitahan’ity aretina ity dia mitohy hatrany ny fanaovana ny vaksiny miaro amin’ny kitrotro, ary amin’ity indray mitoraka ity dia terena mihitsy ny ray aman-dreny hanao vakisiny ny zanany. Ho an’ireo zaza latsaka ny 1 taona, izay manana fotoana hanaovana vakisiny amin’ny faha-9 volana dia tsy maintsy hatao vakisiny miaro amin’ny kitrotro. Toraka izany koa ireo zaza latsaka ny 5 taona, eto amin’ny faritra Analamanga. Hisy mihitsy araka izany ny fitetezana fokontany ataon’ny minisitera amin’ity indray mitoraka mba hiantohana fa tena vita vakisiny tokoa ireo zaza latsaka ny 5 taona.
Fantatra koa fa efa miparitaka any amin’ny faritra ivelan’ Antananarivo ny aretina kitrotro amin’izao fotoana izao. Isany ahitana ny tranga any Antanifotsy, Ambatondrazaka. “Tsy azo ihodivirana ny mety hiparitahan’ny amin’ireo faritra tsy lavitra an’Antananarivo satria midina mankany ireo olona nifampikasoka tamin’ny mararin’ny kitrotro ka voany avy eo. Fa vao misy mafana, mikohaka dia tokony hanantona mpitsabo avy hatrany. Ireo izay voa ihany koa, tsy tokony hiasa, sy tsy hianatra ho an’ireo zaza. Mbola hamafisiko hatrany fa ny fanaovana kitrotro ihany ny fisorohana ny aretina kitrotro”, hoy ny fanazavan’ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Dr Rakotoarivony Manitra. Notsiahivina ihany koa fa tsy tokony ho voan’ny aretina kitrotro ireo olona efa vita vakisiny fa ho an’ireo mbola tsy vita nefa voan’ny aretina dia maro ny mety voka-dratsin’izany. Toa ny fahajambana, ny “méningite”, ny aretim-pisefoana, ny “diarrhée profuse” sy ny maro hafa. Manoloana ny fisian’ny trangam-pahafatesana, teny amin’ny hopitaly Befeletanana dia manda mafy ny fisian’ny maty ny aretina kitrotro ny ministera. Nohamafisiny Dr Rakotoarivony Manitra fa mbola tsy misy ny maty fa aretina hafa no nitarika ny fahafatesan’ireo zaza roa teny an-toerana.
Masoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous : Vonona hanampy an’i Madagasikara amin’ny fifidianana
Noraisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny masoivohon’ny OIF, Hervé Ladsous, ny 23 jolay lasa teo. Nandritra ny fihaonan’ny roa tonta, dia nanasongadina ny fitarihan’i Madagasikara ny fitantanana ny Frankofonia nandritra izay roa ...Tohiny
Ceni:Hiantoka ny fangaraharahan’ny fifidianana
Kaominina Mahajanga : Tsy voaloan’i Mokthar ny karaman’ny mpiasa